Saintsaino ve hoe inona no ilaina amin'ny fananganana tohodrano? - Ellicott Dredges
Febroary 11, 2019
Hatramin'ny nanombohan'ny orinasa, Ellicott Dredges dia nanana fotoana tsy manam-paharoa mba hanamboarana hantsana namboarina ho an'ny mpanjifantsika izay heverina ho mihoatra ny halemem-pandrindrana nentin-drazana. Ny lahatsary farany misy anay, “Vondrona Projet lehibe nataon'i Ellicott, ”Manasongadina ny fanekena nataon'i Ellicott hanangana dredge mavesatra azo itokisana. Ho fanampin'izay, ny mpijery dia hanana fotoana hahitana ny ekipa ataontsika rehefa miara-miasa izy ireo hamokatra dredge iray izay mihoatra ny fanantenan'ny mpanjifa.
Ny fividianana dredge dia mety maharesy ny olona sasany. Amin'ny maha orinasa anay, dia reharehantsika tokoa izahay amin'ny fanampiana ny mpanjifanay hahita ny dredge mety. Ny ekipanay dia miara-miasa mivantana amin'ny mpanjifa mba hanampy azy ireo hamantatra hoe iza no dredge mety tsara amin'ny zavatra ilainy ary hanatanteraka tsara indrindra rehefa avy nampitaina azy izy ireo.